कसरी छान्ने राम्रो मोबाइल चार्जर ? – Nepalpostkhabar
कसरी छान्ने राम्रो मोबाइल चार्जर ?
नेपालपाष्ट खबर । ११ बैशाख २०७८, शनिबार ०६:३४ मा प्रकाशित
एजेन्सी – अहिले हाम्रो हातमा कुनै न कुनै कम्पनीको स्मार्टफोन पक्कै छ । स्मार्टफोन अहिले हाम्रो अत्यावश्यक जस्तो भइसकेको छ । कुनैपनि बेला छुटाउन नचाहाने स्मार्टफोनको चार्जरमा वा चार्जिङ केबलमा समस्या भएको पनि बारम्बार सुन्नमा आउँछ । चार्जर केबल बिग्रिनुका धेरै कारण छन् ।